2022 National Budget "Bereft Of Substance Or Form" - Biti
Kamukomana yaye kazopinda zvako nyangwe tichida kana kusada. Anodiwa neruzhinji rwevanhu anongopinda. Saka ngaapinde zvake mukomana kana adiwa nevanhu.
Biti last time was complaining about y they are mixing ZWL and USD PABudget now kwashandiswa ZWL chete mazifigures avhundutsa vanhu okey then lets use blackmarket rates or interbank rates toconverter those to USD toona kuti imbori marii #changamu
Aaaaah takananga kuma trillion dollars, that's where we are going. Kubango chinjanisa ma Finance Ministers imi maShefu muchiba sezvakaita Prisca na Obediah. Hapana chonofamba. Bvisai mbavha mu Government. Vari kudzimba dzavo instead of JAIL
Finance sec 5 months ago
Quadrillions here we come again🤑🤑
Mudhara biti vanongotaura taura chokwadi
biti problem yake imwechete ziromo rake zihombee harigone kuvharaa... Ndosaka Ari weMDC C.
ED pfeeeeeeeeeeeee 2023
Mdara bob 5 months ago
Pfeee kudiniko hatizvidi
Ukukwanguraaa wegaaaaaa..... Pfeeeeeee mudharaaa ED ngati vatsvatsvangeeee
Your issue is you're always negative, as such we fail to get you genuine point.
During your days as Finance Minister taingokurumbidzawo wani although we were using a stable currency USD. Remember Chinamasa introduced USD.
Haaa mukoma Biti mawords enyu anoita tisanzwisise nyaa yenyu but still ,mukomana ngaaipinde hake
14 hours ago 69 Comments